မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Time for World Heritage Site: Greater Blue Mountains - Day 6
Posted by mabaydar at 6:38 PM
My Fri Yay
Ah yan kg par tal shin read ya tar :)
မဗေဒါခရီးသွားပိုစ့်ရေးတာ အဲ့လိုအသေးစိတ်လေးတွေ ကိုယ်တွေ့ လေးတွေကို အခြေခံပီး ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေရေးလို့သဘောကျတာ သွားမယ့်သူရှိရင်တောင် မဗေဒါရေးတာလေး ပြန်၂ဖတ်ပီး လမ်းကြောင်းလည်း အဆင်သင့်မှတ်လို့ လွယ် အချိန်လည်းတွက်ရလွယ် စားစရာသောက်စရာလည်း အဆင်သင့်ယူသွားလို့ ရတယ် တကယ်က ခရီးသွားပိုစ့်ဆိုတာ မဗေဒါရေးသလိုရေးမှ ဗဟုသုတကော အတွေ့ အကြုံရော မှတ်သားစရာကောရတာ ကိုယ်တိုင်သွားတာကို တိုးနဲ့ သွားတာထက်ပိုသဘောကျတာတော့ မဗေဒါနဲ့ တူတယ် အခုပိုစ့်ကိုပိုသဘောကျတယ် သဘာဝတောတောင်ပုံတွေနဲ့တကူးတကသွားပီး ဒါ့ပုံရိုက်ခဲ့ အတွေ့ အကြုံကို သေချာရေးပြထားလို့တို့ အလိုသာဆို အဲ့လို အစွန်အဖျားတွေနားမသွားရဲဘူးထင်တယ် မဗေဒါပုံတွေကြည့်ပီး အသည်းတယား၂နဲ့ရှုခင်းပုံတွေကော ညီမ၃ယောက်တောင်ပုံရော တကယ်သဘောကျတယ် ဘယ်လောက်ပဲ မဗေဒါစာထဲမှာ စိတ်တိုရလိုအဖြစ်အပျက်ကြုံရ ကြုံ့ရ ဒါ့ပုံထဲက မဗေဒါမျက်နှာလေးကတော့ အမြဲကိုပြုံးနေတာကို ချီးကျူးမိတယ် တို့ သာဆို အဲ့လိုတောင်ပြုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ထပ်ပီးရေးပါမဗေဒါ အခုလို အသေးစိတ် ကိုယ့်အတွေ့ အကြုံ အခက်အခဲလေးတွေနဲ့ကြုံရတဲ့ လူတချို့ ရဲ့ စရိုက်ကလေးတွေနဲ့ ယှဉ်ရေးပြတော့ နောက်လူအတွက် သင်ခန်းစာလည်းရ မှတ်သားစရာလည်းဖြစ်ပါတယ် ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ် မအားတဲ့ကြားက ခုလို ရေးလို့ 
မဗေဒါ ရဲ. ခရီးသွားပိုစ့်လေးတွေဆိုအမြဲဖတ်ဖြစ်တယ် ။ စိတ်ဝင်စားစရာလဲကောင်း ဗဟုသုတလဲရ ဖတ်လို.လဲကောင်းတယ်။ မအားတဲ့ကြားက ရေးလို.ကျေးဇူးပါ ။ အဆင်ပြေမယ်ဆို ထပ်ပီးရေးပါ အုန်းနော်။ :)
8/12/2013 1:58 PM
ဒီ Anonymous လေးက မဗေဒါ ဖေ့ဘွတ်ထဲက သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက်များလား တိဝူးနော်... ဒါပေမဲ့ ကွန်မန့်လာပေးသွားတဲ့အတွက် thanksamillion.... :D
Thanks for taking me to Blue Mountains and sharing your experience. I didn't know this is one of the World Heritages.I enjoyed reading the whole post. Will keep an eye your blog for next posts. :)
8/15/2013 4:00 PM
မဗေဒါရဲ့ခရီးသွားပိုစ့်လေးတွေကိုဖတ်တိုင်း ကိုယ်ပါလိုက်ရသလိုပဲ ။ အော်ဇီကိုတောင်သွားချင်လာပြီ ။ ဆက်ရေးပါဦးမဗေဒါး)
8/23/2013 10:40 AM
ခရီးသွားဗပာုသုတတွေကို အခုလိုမျှဝေပေးတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါလို့ ဆိုခြင်ပါတယ်
9/02/2013 9:18 PM
သွားချင်ရင် Target ထားပြီး လုပ်သာလုပ် ညီမရေ... တကယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်... အားပေးလို့ကျေးဇူးပါ... နောက်ဆုံးတစ်ရက်ရေးဖို့ကျန်သေးတယ်...
9/03/2013 5:37 PM
အမြဲလာဖတ်ပြီး ကွန်မန့်ချန်သွားတတ်တဲ့ မောင်လေးဝိ၀ိကိုလဲ အစ်မက မှတ်မှတ်ရရကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ဒါလည်းဖတ်မရဘူး ဒါနဲ့ ရီစရာတခုပြောလိုက်အုံးမယ် ခေါင်စဉ်ကိုက ကျန်တော့်ဖုန်းထဲမှာ မဗဒေါရဲ့ 
ဗဒေါလမျး တဲ့ဓါတ်ပုံနဲ့နေရာတွေရေးထားတာအရမ်ဖတ်ချင်လို့ ပါ
9/07/2013 7:34 PM
မောင်စိုးကြီး... ဖုန်းနဲ့ဖတ်လို့မရလောက်ဘူးထင်တယ်.... အင်း အချိန်ရရင်တော့ ဇော်ဂျီပြန်ပြောင်းထားပေမယ်နော်... :D .. အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ...
Mg Yin Nge Twe said...
ဖုန်း နဲ့ ဖတ်လို့ မရဘူးနော်...
ခုပြန်ပြင်ထားတယ်... ဖတ်လို့ရပြီလား မသိဘူး..
12/04/2013 12:38 AM
အမအပေါ်ကတောင်ကြီးဖဝါးအောက် ဘာကြောင့် Blue Moutain လို့ခေါ်ရတာလဲ6dayမတိုင်မီ အဲဒါဖတ်လို့ရတာအောက်ကဟာကမရဘူးအမ
12/04/2013 1:16 AM
အပေါ်ကတောင်ကြီးဖဝါးအောက် ဘာကြောင့် Blue Mountain ဖြစ်ရတာ 6day မတိုင်မှီအဲဒါပဲဖတ်လို့ရတာအောက်ကဟာကမရဘူး